पक्राउअघि डा केसी र प्रहरीबीच यस्तो कुराकानी [भिडियोसहित]
पुस २४, २०७४| प्रकाशित ०३:१८
सोमबार बेलुका ७:३५ बजे। त्रिवि शिक्षण अस्पतालको साँघुरो कोठा। कोठाभित्र भुइँमा रहेको ओछ्यानमा डा गोविन्द केसी १४औं अनसन बसिरहेका छन्। कोठाभित्र केही सञ्चारकर्मी र डा केसीका समर्थक छन्।
कोठाको ढोका खुल्यो। एक हुल प्रहरी देखिए। तीमध्ये दुई जनाले ढोकाबाटै डा केसीलाई नमस्कार गरे अनि एक जना भित्र पसे। भित्र छिर्ने प्रहरी थिए, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी रामदत्त जोशी। त्यसपछि सुरु भयो डा केसी र एसपी जोसीबीच कुराकानी-
एसपी जोशी: डाक्टर सा'प सञ्चै हुनुहुन्छ?
डा केसी (मुसुक्क हाँस्दै): अहिलेसम्म त ठीकै छु।
एसपी जोशी: डाक्टर सा'पले त थाहा पाइसक्नुभो होला, हामी किन आएको भनेर। डाक्टर सा'प अब हामीसँग जानुपर्छ।
डा केसी: खै, आदेश भएको छ भन्ने कुरा सञ्चार माध्यम र केही सहयोगीबाट सुनेको छु। तर, के हो भन्ने पूरा जानकारी चाहिँ छैन।
एसपी जोशी: डाक्टर सा'पलाई हामीसँग लैजाने भन्ने आदेश छ।
डा केसी: ए, त्यसो भए म मेरो वकिलसँग सल्लाह गर्छु। तपाईं पनि उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्।
एसपी जोशी: हुन्छ। उहाँ (वकिल)को नम्बर पाऊँ न!
(डा केसीको मोबाइलमा वकिलको फोन आउँछ। केसी वकिलसँग कुरा गर्दै प्रहरी आएको र प्रहरीले फोन गर्ने जानकारी गराउँछन्। डा केसीले फोन राखेपछि एसपी जोशीले वकिललाई फोन गर्छन्। फोनमा उनले पक्राउ पुर्जी लिएर आएको र डा केसीलाई पक्राउ गरेर महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु लैजाने जानकारी गराउँदै फोन राख्छन्।)
डा केसी: अब मैले के गर्नुपर्‍यो त?
एसपी जोशी: पक्राउ पुर्जी र अदालतको आदेश लिएर आएको छु। पक्राउ पुर्जीमा हस्ताक्षर गरिदिनुहोला।
डा केसी: अदालतको आदेशमा के छ? अनि पक्राउ पुर्जीमा के लेखिएको छ पढेर सुनाउनुहोस् न त!
(एसपी जोशीले दुवै पत्र पढेर सुनाउँछन्।)
डा केसी: देशको नियम-कानुन र नेपाल प्रहरीको कदर गर्दै म यो पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै छु। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको आदेश मानेर होइन। म तपाईंहरुसँग हिरासतमा जान तयार छु। तर, अदालतमा जाँदिनँ। मेरो अनसन जारी छ। हिरासतमा पनि जारी रहन्छ।
एसपी जोशी: हामी प्रक्रिया अनुसार जाने हो। हामीले पनि आदेशको पालना गरेका हौं।
डा केसी: तपाईंहरुको काममा मेरो कुनै प्रश्न र गुनासो छैन।
एसपी जोशी: हामी पनि आदेश अनुसार नै काम गर्ने न हो।
डा केसी: पहिला त मलाई तपाईंहरु मेरो हालचाल सोध्न आउनुभएको होला जस्तो लागेका थियो। तर, होइन रहेछ। विगतका अनसनमा तपाईंहरुले यहाँ बाहिर बसेर धेरै सुरक्षा दिनुभएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै होला, मेरो हाल के छ भन्न आएको होला भन्ने थियो।
एसपी जोशी: के गर्ने डाक्टर सा'प, हामी पनि बाध्य छौं।
डा केसी: खै पत्रमा कहाँ हस्ताक्षर गर्ने हो?
(एसपी जोशीले पक्राउ पुर्जीको पछाडि बुझिलिएँ लेखेर डाक्टर केसीलाई हस्ताक्षर गर्न दिए। डा केसीले हस्ताक्षर गरे।)
डा केसी: म डराएर हस्ताक्षर गरेको होइन नि! म मर्न तयार भएको मान्छे। यस्तो आदेशदेखि डराउन्नँ। मेरो अहिलेको लडाइँ न्यायालयसँग होइन, न्यायालयमा बसेर जथाभावी गर्नेसँग हो। त्यसैले तीन करोड नेपालीको हितका लागि हिरासतमा अनसन बस्छु, तर अदालत जान्नँ। जसको राजीनामा माग गरेको छु, त्यही व्यक्तिको आदेश मान्दै मान्दिनँ।
एसपी जोशी: अब हिँडौं डाक्टर सा'प।
डा केसी: पिसाब फेर्न जान त पाइन्छ नि? कि भाग्छ जस्तो लाग्छ? म निडर मानिस हुँ, भाग्दिनँ ढुक्क हुनुहोस्।
एसपी जोशी: हुन्छ, जानुस्।
(डा केसी शौचालय जान्छन्। डा केसी आएपछि दुईतले भवनबाट डा केसी र प्रहरी तल ओर्लिन्छन्।)
प्रहरी अस्पतालको बा १ झ ७२६६ नम्बरको एम्बुलेन्समा डा केसीलाई राखिन्छ। डा केसी एम्बुलेन्सभित्र हात उठाउँदै मुस्कुराइरहन्छन्। ८:१० मा एम्बुलेन्स महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुतर्फ लाग्छ।